Root Alpha GPC Powder (28319-77-9) Soosaarayaal - Kiimiko loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
alpha-GPC (L-Alpha glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate) waa dabiici ……
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9) video
Root Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9)
L-Alpha glycerylphosphorylcholine (alpha-GPC, choline alfoscerate) waa isku duubnaan dabiici ah oo laga helo maskaxda. Sidoo kale waa horudhac parasympathomimetic acetylcholine taas oo laga yaabo inay leedahay awood u leh daaweynta cudurka Alzheimers iyo waallida kale.
Budada Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada ayaa si dhakhso leh choline ugu gudbisa maskaxda guud ahaan caqabadda dhiig-maskaxda waana horudhaca biosynthetic ee acetylcholine. Waa daawo aan dhakhtar qorin inta badan wadamada.
Goobta Alpha-GPC waa dawo rijeeto oo loogu talagalay daaweynta cudurka Alzheimers. Ala-GPC waxaa laga helaa oo keliya cunnooyinka cuntada, inta badan alaabooyinka kor loogu qaadayo si loo hagaajiyo xasuusta. Qalabka kale ee loogu talagalay alpha-GPC waxaa ka mid ah daaweynta noocyo kala duwan oo asaasaqa ah, faalig, iyo "miyir-qabatin yar" (TIA) ).
Kalluunka Raw GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9) Smamnuucista
Product Name Root Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada
Magaca Kiimikada Choline Alfoscerate; Alpha GPC; L-Alpha glycerylphosphorylcholine; Choline glycerophosphate
brand NAme Taariikhda lama heli karo
Fasalka Daroogada asalylcholine parasympathomimetic
Molecular Wsideed 257.223 g / mol
barafku Psaliid 142.5 ° C
Hakinta Point Taariikhda lama heli karo
Biological Life-Life Alpha GPC nus-nimo waxay ku dhowyihiin saacadaha 4-6, laakiin waxaa la sheegayaa inay ugu sarreyso saacadaha 1-2
Color Dufanka adag
Storage Temperature 0 - 4 ° C muddo gaaban (maalmo illaa toddobaadyo), ama -20 ° C muddo dheer (bilo).
Application Choline Alfoscerate waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurka Alzheimer's Disease iyo waallida kale.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9) Sharaxaad
Alpha GPC waa magaca guud ee loo yaqaan 'L-Alpha glycerylphosphorylcholine', oo ah 'cholinergic nootropic' oo si dabiici ah u dhaca laakiin sidoo kale loo qaadan karo kaabis ahaan. Budada Alpha GPC waxaa si fiican loogu yaqaanaa si dhakhso leh oo kalsooni leh u gaarsiiya maskaxda maskaxda si loo abuuro garashada kobcinta neurotransmitter acetylcholine.
Waxay leedahay faa'iidooyin xooggan maskaxda iyo jidhkaba waxaana laga yaabaa inay kor u qaadaan howlaha garashada ee dhammeystiran, kor u qaadista caafimaadka gacanta, iyo in ay sii wadaan isku-dheellitirka maskaxda ee maskaxda.
Alpha-GPC si dhakhso ah ayuu ugu gudbiyaa qulqulka maskaxda ku jirta bararka dhiigga ee maskaxda iyo walxaha biosynthetic ee acetylcholin. Waa dawo aan dhakhtar qorin oo dalal badan ku yaal. FDA waxay go'aamisay in la qaato wax ka badan 196.2 mg / qof / maalin waxaa loo tixgeliyaa GRAS. Qaar ka mid ah wadamada yurub, waxaa lagu maamulaa daroogada dhakhtar qoro oo loo isticmaalo daaweynta cudurka Alzheimers.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9) Mashruuca Waxqabadka?
Alpha-GPC waxay taageertaa habdhiska dareenka oo dhan iyadoo la xoojinayo hawlaha acetylcholine iyo cholinergic. Waxa kale oo ay kor u qaadi kartaa heerarka farriimaha kale ee maskaxda difaaca sida:
Waxaa intaa dheer, sida ku xusan, waxay kor u qaadi kartaa heerarka hoormoonka koritaanka sidoo kale.
Faa'iidooyinka ee Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9)
Hagaajinta Hagaajinta iyo Aqoonta Koriinka
Waxay hagaajinaysaa dib u soo kabashada
Xakamaynta Waxqabadka Iskudhiga ah, Xoogga Korodhka iyo Soo-kabashada Dib-u-Celinta Shaqada
Waxaa laga yaabaa in la hagaajiyo aragga
Ka ilaali shucuurta
Talinayo Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9) qiyaasta
Alpha GPC waxay ku saabsan tahay 40% miisaan ahaan. Sidaa daraadeed 1,000 mg ee budada Alpha GPC waxay bixisaa qiyaasta 400 mg of choline.
Alpha GPC ayaa soo jeediyay qiyaasta faa'iidooyinka garashada waa 250-1,200 mg maalintii. Halkan waxaa ah burbur ku yimid nidaamka daaweynta:
Cudurka Alzheimers iyo waallida: 400 mg, 3X maalin walba bilaha 6 - 12.
Soo kabashada xanuunka: 1,000 mg maalin walba loogu talagalay bisha 1 (sida duritaanka).
400 mg afka, 3X maalin kasta 5 bilood ka dib
Waxqabadka ciyaaraha: 250 mg maalinle ah toddobaadka 1 
600 mg maalin kasta 1 - 6 maalmood.
Indhaha: 400 mg, 2X maalin walba bilaha 2.
Marka loo eego caddaynta anecdotal, qiyaasta saameynaha nootropic waxay u dhaxaysaa 400 ilaa 1,200 mg / maalin. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bilowdo dhamaadka hoose iyo inaad jawaabto jawaabtaada.
Dhibaatooyinka ay keento ee Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) budada (28319-77-9)
Budada Alpha-GPC waxay ku badbaado dhammaan tijaabooyinka caafimaadka. Qaybta bukaanka, waxay sababtay waxyeelo sahlan sida:
Daraasadaha nabdoon ee ku saabsan eeyaha iyo jiirka, megadosku (illaa 3,000 mg / kg) ayaa yaraaday waxqabadka xoolaha. Cilmi-baadhayaashu waxay soo gabagabeeyeen in muddo-dheer (26 usbuuc) isticmaalka alfa-GCP ee 150 mg / kg (oo ka badan 10 g maalin kasta ragga waaweyn) ma laha khatar caafimaad.
Sababtoo ah la'aanta xogta nabadgelyada, carruurta iyo haweenka uurka leh ayaa laga yaabaa inay ka fogaadaan alfa-GPC.